Egwu ga-etinye usoro iheomume na nsụgharị ọzọ | Gam akporosis
Egwuregwu egwu ka emelitere na 6.11 na bọtịnụ "kpọọ" na ọba ma ga-agbakwunye ngụ oge n'oge adịghị anya
Ihe kacha ọhụrụ dị mkpa gbasara Google Play Music ọ bụ ọnwa abụọ gara aga na m na-atụ anya ihe olu njikwa ga-aka nke a music gụgharia ngwa nke bụ na a siri nnọọ ike Atiya na na Spotify na Apple Music na-eme ihe ha. Agbanyeghị, ọ bụ a ọrụ nke nwere ọtụtụ mma na nnukwu repertoire nke ọdịiche dị iche iche nwere ike ịnweta site na ụgwọ ọnwa ma ọ bụ site na akaụntụ efu ma ọ bụrụ na ịchọrọ bulite ọtụtụ puku egwu ị nwere onwe gị.
Ugbu a, ọ na-e emelitere ka mbipute 6.11 nke na-agbakwụnye, dị ka oké mma, na igodo bọtịnụ ma ọ bụ playback na album kaadị na redio. Mana ma eleghị anya, ihe kachasị mma banyere mmelite a bụ na ọ na-emeghe ụzọ maka ịmebata oge na nsụgharị ọzọ. Enwere ike igbanwe oge a ka, na oge ụfọdụ X, a ga-agbanyụ ya ma anyị na-abanye n'ime ụwa nke nrọ na akwa anyị.
Nnukwu uru nke nsụgharị a, 6.11, bụ na ị nwere ike ịkpọ ọba niile ma ọ bụ ọdụ redio site na peeji nke ya na-enweghị ichere ka onye ọzọ mara ka egwu gụgharia dị. Obere nkọwa nke nwere ike iyi nzuzu, mana n'ikpeazụ ọ na-egosi ịghara igbu oge na ihe enwere ike ime site na otu bọtịnụ ahụ.
Mana njirimara kachasị mma anyị ga-ele anya ibata na-esote mbipute bụ ngụ oge. Achọtara ya na eriri afọ nke APK n'ụdị koodu na-eche ka arụ ọrụ ya. Enwere ntakịrị ihe ịkọwa maka ọrụ ya, ebe ọ bụ na m tolitere na mbụ.
Ị nwere ike budata ngwa nke 6.11 nke Play Music na otú nweta bọtịnụ ndị ahụ mmeputakwa ma ọ bụ «kpọọ».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwuregwu egwu ka emelitere na 6.11 na bọtịnụ "kpọọ" na ọba ma ga-agbakwunye ngụ oge n'oge adịghị anya
Ọtụtụ ihe na-echere gị na Ghostbusters, nke Sony na Activison wepụtara na gam akporo